တရုတ်အလိုအလျောက် Potentiometric Titrator ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Jiahang တူရိယာများ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Potentiometric Titrator > အပြည့်အဝအလိုအလျောက် Potentiometric Titrator > အလိုအလျောက် Potentiometric Titrator
အလိုအလျောက် Potentiometric Titrator
အလိုအလျောက် Potentiometric Titrator သည် potentiometric titration နည်းလမ်းကို သုံး၍ volumetric ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက် high-precision electrochemical analysis tool တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် modular ဒီဇိုင်းကိုလက်ခံပြီး volumetric titration device, control device နှင့် testing device တို့ပါ ၀ င်သည်။
အလိုအလျောက် Potentiometric Titrator isahigh-precision electrochemical analysis instrument for volumetric analysis using potentiometric titration method. It adopts modular design and consists of volumetric titration device, control device and testing device.
1. အလိုအလျောက် Potentiometric Titrator Introduction
အလိုအလျောက် Potentiometric Titratorcan carry out acid-base titration, REDOX, precipitation and complexation titration. The instrument has the functions of constant titration, micro titration, end-point setting titration, volume setting titration and mode titration. Users can also build their own special titration methods according to their actual needs.
2. အလိုအလျောက် Potentiometric Titrator Parameter
Volumetric titration ယူနစ်
15ml burette: ± 0.025ml; 25ml burette: ± 0.035ml
15ml burette: 1/20000;
25ml burette: 1/10000
Drive resolution ကို
Potentiometric Titration Module ပါ
0.2 mV 0.02pH ဖြစ်သည်
(-10.0-100.0) â„ ƒ
2 PCs (15mL / 25mL)
mv / pH ကိုတိုင်းတာသော electrode interface
ကိုးကား electrode interface ကို
လက်ခံနိုင်သော USB interface
Output Interface ကို
၈ လက်မ TFT touch screen အရောင်
3. အလိုအလျောက် Potentiometric Titrator Feature And Application
၇။ GLP GMP အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုလိုက်နာပါ။ တိုက်ရိုက် data print ထုတ်ခြင်းကိုထောက်ပံ့သည်
4. Fields of use အလိုအလျောက် Potentiometric Titrator
အလိုအလျောက်အလားအလာအားဖြည့်စက်ကိုဓာတ်ခွဲခန်း၏ယေဘူယျအခြေခံကိရိယာများတွင်အသုံးပြုသည်၊ အလွန်ကျယ်ပြန့်သည်၊ အစားအစာ၊ ဆေးဝါးစစ်ဆေးခြင်း၊ ရောဂါထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ရေသန့်စင်ခြင်း၊ ရေနံ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရေကြောင်း၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအား၊ သင်ကြားမှု၊ သိပ္ပံသုတေသနနှင့်အခြားဆက်စပ်သောနယ်ပယ်များ
Jiahangအလိုအလျောက် Potentiometric Titrator has obtained CE certification, TART certification, ISO quality management system certification, more than 10 software copyrights and multiple patents to ensure that each instrument has stable performance and excellent quality.
မေး။ ။How many years have your company made အလိုအလျောက် Potentiometric Titrator?
hot Tags:: အလိုအလျောက် Potentiometric Titrator၊ တရုတ်၊ စက်ရုံ၊ စျေးသက်သက်သာသာ၊ အဆင့်မြင့်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စျေး၊ CE
Potentiometric Titration ယန္တရား